Maitiro ekuona Netflix paLinux | Linux Addicts
Maitiro ekuona Netflix paLinux
Diego ChiGerman Gonzalez | 23/05/2022 16:13 | General
Netflix inogona kutariswa paLinux nechero browser inotsigira HTML5 player, kunyangwe mamwe maplugins angangoda kuiswa.
Netflix ndiyo yekare yemavhidhiyo-pane-inoda mapuratifomu uye zvine nharo ndiyo yakagadzira bhizinesi. Google haina kutanga bhizinesi rekutsvaga, uye haisi yekare, asi ndiyo kambani inotonga pamusika. Kusanganiswa uku kunogadzira kana iwe Google "Maitiro ekuona Netflix paLinux" mibairo yekutanga yaunoona yapera zvachose.
Chokwadi ndechekuti kuona Netflix paLinux haina zvakavanzika zvakawanda, uye ini ndichakuudza nezve mashoma arimo mune ino chinyorwa.
1 Nezve kupenya, marambi esirivha uye Steve Jobs
2 Maitiro ekuona Netflix paLinux
3 DRM-yemahara dzimwe nzira dzeNetflix
Nezve kupenya, marambi esirivha uye Steve Jobs
Kana tikaedza kuita chimwe chinhu munhevedzano yezvinyorwa, zvishoma pane izvo zvatinowanzo buritsa, ndezvekuti haungokope mirairo mune terminal, asi kuti unonzwisisa zvauri kuita nemhedzisiro yacho. Zvakadaro, unogona kuenda kuchikamu chinotevera uko kune mirairo.
Kuona Netflix paLinux iri nyore kwazvo. Asi kuita kuti zviitike zvakatora kufunga kwakawanda, kukuvadza chigadzirwa chinotungamira pane imwe kambani hombe yemakomputa, uye shanduko yepfungwa mumukuru pane imwe.
Nhoroondo yewebhu kuona vhidhiyo yakatanga nesoftware inonzi Future Splash. iyo yaisanganisira maturusi ekupopotera ewebhusaiti ayo aisanganisira zvinyorwa uye mapikicha achiripo. Kuti uone maanimations aya, paidiwa muoni chaiwo uyo waigoverwa pamwe chete nemabrowser makuru epanguva iyoyo. Yakatorwa neMacromedia, zita rayo rakapfupikiswa kuita Flash uye rakave chiyero chekutamba multimedia zvirimo pawebhu.
Muna 2004, Flash yaisanganisira kutsigirwa kuzere kwevhidhiyo, uye muna 2007 yakava tekinoroji yesarudzo yevatatu mainjiniya uye mumwe investor simba rekuona vhidhiyo sevhisi yemavhidhiyo anogadzirwa nekuiswa nevashandisi. Isu tinozviziva seYouTube uye ikozvino ndeyaGoogle.
Muna 2007, Microsoft yakaburitsa tekinoroji yayo yekutepfenyura inozivikanwa seSilverlight. Kunyangwe yanga isina kumbobvira yanyanya kufarirwa pakati pevashandisi, yakasarudzwa nemakambani mazhinji nemasangano kutumira zvirimo zvine kodzero. Mumwe wavo aive Netflix. Ndosaka mune akawanda ezvidzidzo zvekutarisa Netflix paLinux uchaona kuti vanokukumbira kuti uise chimwe chinhu chinonzi. Moonlight (iyo vhezheni yeSilverlight yeLinux). Haufanire kuzviita.
Pakatanga nharembozha dzakangwara kuve nemukurumbira, Adobe (yaive yatenga Macromedia) yakaedza kufambisa Flash pasina kubudirira. Steve Jobs, uyo aida kuzvivimbisa kuti ndiye ega pakugovera zvikumbiro zvemidziyo yake, akaishandisa sechikonzero chekubvisa tekinoroji yaigona kubvumira vanogadzira kushambadzira maapplication pasina kugovana purofiti neApple.
Kuti udzivise kushandiswa kusingatenderwi uye kugovera, vanogadzira zvemukati uye vanopa vanoshandisa software mhinduro.
Flash yakanga ichine imwe poindi (yevagadziri vemukati uye vanogovera).
DRM inomirira Digital Rights Management. Uku manejimendi kunosanganisira kushandisa tekinoroji kudzora nekugadzirisa kuwana kwezvinhu zvakachengetedzwa necopyright. Izvo ndezvekuganhurira kuwana uye kugovera kwezvinotaurwa kune izvo zvinotenderwa nemuridzi wekodzero idzodzo.
Kazhinji, kushandiswa kweDRM kunosanganisira kushandiswa kwekodhi yekombuta inodzima kukopa zvemukati kana kudzikamisa nhamba yemidziyo kubva kwairi kuwanikwa chigadzirwa. maapplication anoganhurira izvo vashandisi vangaite nezvinhu zvavo kana encryption yedhijitari midhiya, iyo inogona kuwanikwa chete neavo vane kiyi yekudhirobheta.
Kuburikidza nekushandiswa kwe DRM inowanikwa:
Deredza kugona kwevashandisi kugadzirisa, kuchengetedza, kugovera, kumberi, kudhinda, kana kutora zviratidziro zvemukati.
Seta mazuva ekuti mushandisi asvike kune zvirimo.
Isa mipimo yekupinda nenzvimbo.
Isa mawatermark anoratidza huwandu hwemukati.
Mushure mekurukurirano huru, W3C yakabvumira kuwedzerwa kunodanwa Encrypted Media Extensions (EME) iyo yakabvumira kubatanidza matekinoroji eDRM mune zvakaratidzwa muvatambi zvichibva paHTML 5. Netflix yakatanga kuiedza panharembozha muna 2013 uye yakazowedzera kune yayo webhu vhezheni.
Netflix-webhu ndeye yakakundikana application kubva kuSnap chitoro iyo inoita zvishoma kupfuura kuona iyo Netflix katalogi, asi isingatenderi kutamba.
Kuona Netflix paLinux iri nyore sekusarudza yako yaunofarira browser (Firefox, Chrome, Opera, Vivaldi kana Brave ndemamwe anowirirana) uye kuenda kuNetflix webhusaiti. Zvadaro, isa zita rako rekushandisa uye password. Iwindo rinobuda rinogona kuvhurika richikumbira mvumo yekuisa plugin. Gamuchira kuisirwa uye, kana kwapera, kana ikasangoerekana yavhara uye kuvhurazve browser. Neizvi iwe uchakwanisa kuona zviri mukati pasina kusagadzikana.
Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti, nekusave neyako Linux application, iwe unongogona kuwana mukana weiyo webhu mutambi. Ndokunge, semuenzaniso, haugone kuona mabhaisikopo kana akateedzera kunze kwenyika. Hapana zviripo, sekuziva kwangu. third-party applications inobvumira kudhaunirodha (kunze kwescreen capture kuburikidza nesoftware kana hardware. Chiripo iwebhu maapplications ane zvishoma kudarika browser inokuendesa zvakananga kupeji.
Mamwe acho nde:
netflix-web: Hapana zvakanyanyisa kutaura nezvazvo iyi purogiramu kunze kwekunge iwe usingatombozvinetse nekuiisa Mugadziri wayo haana kana kumbonetseka kuzadza tsananguro uye haana kumisa sarudzo yekuona zvakadzivirirwa mubrowser saka inongoshanda chete kuona iyo catalog uye kuita mabasa ekutonga.
ElectronPlayer: Kana iwe ukatarisa zvirimo paNetflix, YouTube, Twitch, Floatplane, uye Hulu, iwe unogona kunge uchifarira iyi app inokupa iwe nekukurumidza kupinda kune ese aya masaiti. Zvakanyanya kurongeka kupfuura yapfuura, zvinokutendera kuti usarudze iyo yakazara skrini sarudzo, sarudza iyo sevhisi yekutanga uye kuviga menyu. Chero zvazvingava, ichiri browser.
Guvva isoftware inobvumidza iwe kushandura komputa yako kuita yakakwana multimedia centre. Inowanikwa yeWindows, Mac uye Linux (Chokwadi iri mumatura ekugovera kwako) ine zvinokwana zvinowedzera kushanda kwayo. Imwe yacho inokutendera kuti utarise Netflix. Muchiitiko ichi, iri unofficial plugin, saka chidzidzo chinotevera hachibatanidzi vimbiso.
Ndokumbira utarise kuti mazita echikamu anogona kunge akasiyana mumhando dzakasiyana dzeSpanish.
Isa Kodi kubva kune yako yekugovera package maneja.
Dzvanya pane icon sprocket (kona yepamusoro kuruboshwe)
Activa Ratidza notices.
Activa Mavambo asingazivikanwe.
Download iyo inoenderana plug-in vhezheni.
Dzvanya pane cogwheel icon.
Press muZviwedzerwa. (bhatani rechipiri remutsara wekutanga)
Dzvanya Isa kubva ku zip mafaira.
Tsvaga faira uye tinya kuti uiise.
Press en Isa kubva mudura.
Dzvanya about CastagnaIT Repository yeKodi.
Sarudza Vhidhiyo yekuwedzera.
Press en Isa.
Dzvanya en Ok.
Dzokera kune iyo huru skrini uye tinya paAdd-ons.
Dzvanya en Netflix.
DRM-yemahara dzimwe nzira dzeNetflix
Zvisingashamisi, kubatanidzwa kwe DRM tekinoroji mumawebhu zviyero hazvina kugara zvakanaka nemahara uye yakavhurika sosi software nharaunda. Sezvo matekinoroji aya achidzikamisa zvakanyanya kodzero dzevashandisi vekupedzisira, mishandirapamwe inoitwa kurwisa kushandiswa kwavo uye kudzivirira kunyoresa kumasevhisi akaita seNetflix anoashandisa nesimba.
Seimwe nzira, vanokurudzira kudya zvirimo kubva kumasaiti anotevera kuti zvirambidzo izvi hazvishande:
Yakaremara nedhizaini mushandirapamwe wekurwisa kushandiswa kweDRM uye makambani ekurova anoishandisa.
archive yemafirimu Archive.org: Muunganidzwa wemafirimu ekare uye achangoburwa nemavhidhiyo.
Miro Nhungamiro: Catalogue zvemapodcasts nemavhidhiyo.
PeerTube: Federated Platform kugovera mavhidhiyo zvichienderana nemisimboti yemahara software. Pane zviitiko zvinofukidza nyaya dzakawanda dzakasiyana.
Wikimedia Commons: Nzvimbo Wikipedia midhiya zvemukati kuchengetedza.
CinéMutins: Yakazvimirira cinema ine social theme muFrench.
Mufaro: yekushambadzira saiti anime muchiJapan neChirungu. Haiwanikwe munyika dzese.
GOG.COM: Portal kutengeswa kwemafirimu nemitambo. Iyo mitambo, kunyangwe isina DRM, haisi nguva dzose yemahara software.
highspots.com: Mutsimba uye musanganiswa wekarati zvemukati.
RiffTrax: Portal kuona mafirimu uye kuakurukura neshamwari.
VRV: Sainzi ngano, anime uye tech tsika zvemukati. Kurambidzwa nenzvimbo dzenzvimbo.
Wakanin: Kusarudzwa anime yakadanwa uye yakanyorwa. Zvine miganhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Maitiro ekuona Netflix paLinux
Manjaro 2022-05-23 yasvika iine nhau shoma dzakakosha kune vasingashandisi KDE.